ဆောင်းပါ။ Archives - Focus Myanmar
အမေပြောတော့ တရုတ်ပြည် မှာ အလုပ်သွားရှာမယ်ဆို ဘာလို့ အိမ်ထောင်သွားပြုတာလဲ…?
အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်ကတည်းက လွေးအီဟာ သူမတစ်ယောက်ထဲ ဘဝကို ရုန်းကန်လာခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ရွာအတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်း မပြေလည်တာမို့ တရုတ်ပြည်မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုပြီး စည်းရုံးနေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေက ခေတ်စားနေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ နမ့်ခမ်းမြို့နယ် မိုင်းဝီးကျေးရွာ အထက်ဘက် တောင်ပေါ်ကျေးရွာတစ်ဝိုက်ဒေသက ဖြစ်ပါတယ်။
မောင် မမြင်ဖူးတဲ့ သားလေးက မောင့်ကိုလည်း မြင်ဖူးမှာ မဟုတ်ဘူး. . .အိပ်မက်ကလေးလည်း ဖြစ်မယ် မောင်
တမလွန်ဆိုတာ မိုးရွာလေ့ ရှိသလား မောင်အချိန်တိုတိုလေးမှာပဲမောင့်ရဲ့ ဝင်သက်ထွက်သက်ကလေးလည်း တိုသွားတယ်…ဘယ်လိုဘုရားသခင်မျိုးရဲ့လက်နဲ့မှ စစ်ပွဲတွေကို သတ်လို့ရမလဲ…။
လာမည့် ၁၀ နှစ်၊ အနှစ် ၂၀ အတွင်း ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုများက မြန်မာနိုင်ငံကို ဆိုးရွာစွာထိခိုက်စေမည်
နောင်နှစ် ၁၀၀၊ နှစ် ၅၀ မှသာ မဟုတ်ဘဲ နောင် ၁၀ နှစ်၊ အနှစ် ၂၀ အတွင်းမှာပင် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဆိုးဝါးစွာ ထိခိုက်စေပါလိမ့်မည်။ (English below)
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် အမေရိကန်ပြည်ဝင်ခွင့် ပိုလွယ်ကူမယ့်အစီအစဉ် သံရုံးကြေညာ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို လာရောက်လိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ခရီးသွားလာရေး လွယ်ကူစေမယ့် ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာ အစီအစဉ်ကို စတင်လိုက်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ အမေရိကန်သံရုံးက ဒီကနေ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
မန္တလေးသို့ အချိန်လင့် ညဉ့်နက်ပိုင်းရောက်လျှင်
မန္တလေးသို့ အချိန်လင့် ညဉ့်နက်ပိုင်းရောက်လျင်
သံဃာတော်များရဲ့ စေတနာ၊ကရုဏာ၊မေတ္တာတွေဟာဒကာ/မတို့အတွက် အမြဲအသင့်ရှိနေတတ်တယ်။ရေဘေးဒဏ်သင့်ဒကာ/မတွေကိုထောက်ပန့်လှူဒါန်းချင်လို့ ကိုရင်ငယ် စာသင်သားတွေ စုထား သိမ်းထားတဲ့ နဝကမ္မအနုတ်လေးတွေကို ထုတ်နေတာပါ။တချို့ကတော့ကျောင်းပိတ်ရက်ရွာပြန်ရင် ဝတ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ သေတ္တာထဲသေခြာသိမ်းထားတဲ့ သင်္ကန်းလေးကိုတောင် ခဝါသည်ဆီ ဈေးနှိမ်ခံပြီးရောင်းလှူတယ်။
တောင်ပြိုမှု့မှ မိသားစု ၈ယောက်လုံးသေပြီးတစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့တဲ့ သမီးလေး
တောင်ပြိုမှု့မှ မိသားစု ၈ယောက်လုံးသေပြီးတစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့တဲ့ သမီးလေးကို ဝိုင်းကယ်ကြရအောင်ဗျာ. . . .။
အခုလက်၇ှိ မော်လမြိုင်ဆေး၇ုံမှာ ဆေးကုသနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်တဲ့ မွန်ပြည်နယ်လေးကတော့ သဘာဝဒဏ်ကို အလူးအလဲခံနေရပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း လူပေါင်းများစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသလို ဒဏ်ရာရှိသူတွေလည်း မနည်းမနောပါပဲ။